Posted by သက်ဝေ at 5:44 PM
P.Ti July 10, 2009 at 6:00 PM
အမသက်ဝေရေ... အဲလောက် အယူသည်းတဲ့လူမတွေ့ဖူးဘူး.. လွန်တယ်နော်...
ရထားစီး၊ ဘတ်စ်စကားစီးရင်တောင် နံပါတ်ကြည့်ပြီ မကြိုက်ဘူးဆို မစီးပဲနေမယ်ထင်တယ်နော်... :P
အယူသည်းတဲ့အကြောင်းရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းတွေစုနေတာ... အမရေးလိုက်တော့ ရှိသလောက်နဲ့ပဲ ရေးတော့မယ်.. ဟီး...
အမရော ဘယ်နှစ်ထပ်မှာနေတာလဲ... :D
sin dan lar July 10, 2009 at 6:02 PM
သူ့အယူတွေ တစ်ခါမှကို စဉ်းတောင်မစဉ်းစားမိဘူး...။ 13 ဆို unlucky လောက်ပဲသိတာ ။
မေဇင် July 10, 2009 at 6:18 PM
အိုး....မမသက်ဝေရေ..အိမ်အထိများ ရောက်အောင် ပြန်ပို့ပေးသေးလား... ရှိသေးတယ်နော်..ဒီလိုလူမျိုးတွေ ..မမသက်ဝေနောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့ စကားလုံးကို နောင့် သာဆိုရင်တော့ ပြောမိပါပဲ...း)
myatnoe July 10, 2009 at 6:33 PM
ဒီလောက်တောင် အယူသည်းနေမှတော့ စင်ကာပူမှာလဲ မနေသင့်တော့ပြီ၊ အစစအရာရာ စီကာ စဉ်ကာ ပူရတတ်သောကြောင့် စင်ကာပူ ဟု ခေါ်ကြောင်း မသိလေသလော”
စလုံးမှာမနေနဲ့လို့သာပြောလိုက်ပီးတော့လဲ အထပ်မြင့်နေ မနေနဲ့လို့ ပြောလိုက်ပါအမရယ်..
တွေ့ မတွေ့ဘူးပေါင်.. တွေ့လို့ကလဲ အမလို သည်းခံနေမှာမဟုတ်ဘူးးး ထိုင် ..ရွတ်နေတော့မှာ..သူပြောချင်သမျှ ကန့်လန့်ပဲ လုပ်မိမှာ..
အပြုံးပန်း July 10, 2009 at 6:36 PM
ဆရာမ ဂျူးရဲ့ အသံတွေကို ကြားရသလိုပဲ။
khin oo may July 10, 2009 at 6:47 PM
ရွက်လွင့်ခြင်း July 10, 2009 at 7:25 PM
အမသက်ဝေ စလုံးမှာ stess များပြီး အဲလို ဂေါက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ZT July 10, 2009 at 7:42 PM
စကတည်းက လုံးပမ်းနေရတာမို့ စလုံးမှာ မနေဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် HDB ဆိုတာ Highly Dangerous Building မို့ ကွန်ဒိုမီနီယံသာ ဝယ်သင့်ကြောင်း အချွန်နဲ့ မလိုက်ပါ။ :D
Anonymous July 10, 2009 at 8:24 PM
အသိတစ်ယောက်ကတော့ အထူးအဆန်း ဟိုးအပေါ်ဆုံးထပ်မှာပဲ ၀ယ်တယ်။ ဈေးချိုလို့မဟုတ်ဘူး။ သူ့အထက်မှာ လူနေရင် ဘုန်းမနိမ့်မှာစိုးလို့တဲ့။
Anonymous July 10, 2009 at 8:25 PM
sonata-cantata July 10, 2009 at 8:32 PM
A to Z ဆီ မေးစမ်းပြီး ရောက်အောင်ကို လာခဲ့ဦးမယ်
Ko Paw July 10, 2009 at 9:04 PM
အင်း... အယူသည်းတာတော့မဟုတ်။ အထပ်နိမ့်ပြီး တိုက်သက်တမ်းကြာမြင့်ရင် မီးဖိုပိုက်နှင့် အီးပိုက်များ စိမ့်ယိုပေါက်ကျတတ်သည်မှာ ဓမ္မတာ။
ကျနော်တို့ ကလီမင့်တီးတွင် ငှားနေစဉ်က (၂၃ နှစ်သက်တမ်းရှိအိမ်တွင်) မီးဖိုပိုက် ယိုစိမ့်သဖြင့် အိမ်ရှင်က အလူမိနီယံ ဖွိုင်များဖြင့် လာလာပတ်ပေးရသည်။
နောက်တအိမ်သို့ပြောင်းသောအခါ မီးဖိုပိုက်မပေါက်သော်လည်း အိမ်သာပိုက်သည် ပိုက်အကွေးနေရာမှ ရေစိမ့်သည်။ ထိုင်လိုက်လျှင် ခေါင်းနှင့် တည့်တည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း မထိုင်နိုင်ဘဲ သီးလာသော ရေစက်၏ အခြေအနေကို စဉ်ဆက်မပြတ် အကဲခတ်နေရသည်။ ထိုအိမ်တွင်မူ ကြာကြာမနေနိုင်ဘဲ အမြန်ပြောင်းပြေးရသည်။
အိမ်ရှင်များ၏ အဆိုအရ ပိုက်အသစ်လဲတပ်မည်ဆိုက HDB သို့ လျှောက်လွှာတင်ကာ ခွင့်ပြုမှ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်ဆို၏။ သို့သော် လွယ်လွယ်ကူကူကားမဟုတ်။ အထပ်တိုင်းကို အကြောင်းကြားရသည်ဆို၏။
အထပ်မြင့်လျှင် ထိုကိစ္စကို သိပ်စိတ်ပူရန်မလိုပါ။
စုချစ် July 10, 2009 at 9:08 PM
၁၃ဆိုတော့ ဆက်သုံးရမယ်ယူရမှာလား... အစ်မ... ၁၃ထပ်မှာ နေပါ၏
Rita July 10, 2009 at 10:18 PM
အဲဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ဟုတ်ရဲ့လား မမရေ
nu-san July 10, 2009 at 10:32 PM
မမရေ... အဲဒီလို လူမျိုး ရှိသေးတယ်နော်.. အမရေးထားတာ ဖတ်ရင်း ရီလည်း ရီချင်တယ်.. နောက်ပြီး ဘယ်လိုအခန်းမျိုး ၀ယ်ဖြစ်မလဲဆိုတာလည်း သိချင်တယ်.. စပ်စုတာ.. အဟိ.. :D
Kay July 10, 2009 at 10:54 PM
အကြောင်းအရာက..အတော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေ..ပြုံးချင်စရာ ဖြစ်နေပေမဲ့..ကျမကတော့..မသက်ဝေ ရဲ့ အရေးအသားကို ပိုသဘောကျသွားတယ်။
Ko Boyz July 10, 2009 at 11:47 PM
အစ်မ ရေးတာတွေ လက်တော်တော်တက်လာတယ်ဗျ...။
Moe Cho Thinn July 11, 2009 at 12:14 AM
အရမ်းသဘောကျသွားပြီ။ ဈေးဝယ်သူရဲ့ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ထက် ပိုအသုံးချသွားတာပဲ။
Agent နဲ့ မမ မျက်နှာမြင်ယောင်ပြီး တခိခိ ရီနေရတယ်။
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ July 11, 2009 at 12:39 AM
ဒီလက်ခုပ်ကတော့ တစ်ယောက်တည်း လက်နှစ်ဖက်နဲ့တီးတာပဲ လို့ကောက်ချချမိတယ်ခင်ဗျ :P
PAUK July 11, 2009 at 1:51 AM
ဒီမှာတော့ ၄ထပ်ဆို သိပ်ဈေးမရဘူး..
တရုတ်လို ၄ ဂဏန်းက မကောင်းဘူးလေ..
JulyDream July 11, 2009 at 8:31 AM
ဒါတောင် အထပ်ကိုပဲ အယူသည်းနေတာ။ လိုချင်တဲ့ အထပ် ရရင်လည်း မျက်နှာစာ အဖွင့်တွေ၊ နဂါးခေါင်း အလှည့်တွေ၊ ဖုန်းရွှေတွေ ပါလာအုံးမယ် ထင်တယ်။
လွန်လွန်းလှပါတယ်အေ လို့ပဲ ပြောရပြီပေါ့ဗျာ။ အဟား...
ပုံရိပ် / Pon Yate July 11, 2009 at 11:46 AM
အစ်မပြောမှပဲ စင်ကာပူ ဆိုတဲ့ နာမည်ကို စဉ်းစားမိတယ်။ အယူသည်းလွန်းတာတော့ မကောင်းပါဘူး။
Anonymous July 11, 2009 at 11:54 AM
Why Agent talk to your husband for this particular case as Complaint & Fun..?
It shouldn't do asaAgent..
It's not Fun...even though buyer got his/her own point..as reasons..whatever..
Anonymous July 11, 2009 at 1:45 PM
It's your frind that you think you are helping..
But you are complaining and gossiping to the whole world about her/ him..
It's your trustable Agent that you are recommending him/her ..
But He don't keep confidential to his biz informations to his client and Making funny / complaint to other people..
All adult comments here are supporting this gossip and making funny to other' people business..
I can't believe that all people attitude are spoiling...
ဒါမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးအနေနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ အယူသည်းမှုတွေကို သိပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ကြမှာပေါ့...
အပေါ်က အမည်မဖေါ်လိုသူက တမျိုးပဲနော်...
သူ မနှစ်သက်တာကို တခေါက်ပြီးတခေါက် လာဖတ်ပြီး မကျေမချမ်းတွေ ဖြစ်လို့ပါလား...
ညီမသာဆိုရင် ကိုယ်မကြိုက်တာတွေ ရေးထားရင် သွားကို ဖတ်မှာမဟုတ်.... :-P
မီးမီးချစ် July 11, 2009 at 3:39 PM
သူ့ လို အေးဂျင့်ကို ဂျီးများကြည့်ရင် ကောင်းမယ်..ဟိဟိ..
မီချစ် ကတော့ ဘာအယူမှ မရှိပါ..
မီးချစ် အမေ လဲ အေ တူ ဇက် အကျိုးတော်ဆောင်ပဲ..း))
ရေးချင်ဇောနဲ့ G Mail ကို Sign in လုပ်ဖို့ မေ့သွားတယ်။
ညီမ က ခိုင်ဇာပါ။
အမရဲ့ အမြဲတမ်း စာဖတ် ပရိတ်သတ်တယောက်ပါ။
အခုမှသာ Comment ဝင်ရေးဖြစ်တာ။
Hmoo July 11, 2009 at 6:00 PM
U get it :)
Ohh ..wait, let me chk my cmnt number..
aww ..28..ok :)
Anonymous July 11, 2009 at 10:55 PM
I think you are justaStupid Girl..?
Try to grow up...for your sake....
tg.nwai July 12, 2009 at 3:52 PM
အဲဒီတယောက် ငယ်ငယ်တုန်းက ဂဏန်းတွေအပေါ် အဓိပ္ပာယ်ကောက်တမ်းကစားတာကနေ မထွက်နိုင်သေးဘူးထင်ရဲ့..နေစရာနေရာတောင်မရှိတော့ဘူးးရယ်.. သူများတွေလို ကံကောင်း ကံဆိုး ဂဏန်းနှစ်ခုလောက် ကိုင်ထားရင်တော်သေး။ အဲဒါတွေက ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပဒ်ရောက်တတ်တာ..သူ့အစား ပင်ပန်းလိုက်တာ.. သက်ဝေလည်း အို..အသင်လောက..ဆိုပြီး ဖာတလုံးခေါင်းကျားလို ဟစ်ကြွေးလိုက်ပေါ့...ဟဲဟဲ
မီယာ July 12, 2009 at 4:17 PM
မသက်ဝေရေ ရုံးမှာကတည်းကဖတ်ပြီးသား ကော်မန့်ရေးမရလို့ အိမ်ပြန်ရောက်မှရေးရတာ။ အဲ့ဒီလောက်တောင် အယူသည်းတာ ဒွတ်ခပဲ။ ကြောင်မဲကြီးတွေ့ရင် လာဘ်မကောင်းဘူးတို့ လှေကားအောက် မလျှောက်ကောင်းဘူးတို့ ဆိုတာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ အမနံမည် နောက်တမျိုး သိသွားပြီ အေတူဇက် အကျိုးဆောင် ဟီးဟီး
ပုလုကွေး July 12, 2009 at 11:16 PM
အော် ဒီလိုလူတွေလဲ ရှိသလားဗျာ..တော်ရုံဆို တော်သေးသဗျ....လွန်လွန်းးပါတယ်ဗျာ....
တန်ခူး July 13, 2009 at 2:35 PM
သက်ဝေရေ… အရေးအသားလေးက ညက်လိုက်တာ… နောက်ဆုံးနိဂုံးလေးက ချစ်စရာ… အဲဒီလို အမှတ်တမဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို အမှတ်ထင်ထင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရေးတတ်တာ သက်ဝေရဲ့ အနုပညာပါပဲ… သက်ဝေရေ.. စပ်စုတတ်တဲ့ ကိုယ့်အကျင့်အတိုင်း ဘယ်သူများဖြစ်မလဲလို့စဉ်းစားကြည့်မိနေသေးတယ်...